ဝေဟင်စစ်ဆင်မှု ဧရိယာနဲ့ လေကြောင်းတိုက်ပွဲတွေမှာပိုပြီး အသာရစေမယ်တိုက်ခိုက်ရေး drone အယူအဆတစ်ရပ်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးဖော်ထုတ်ပြသခဲ့
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်တဲ့ GA-ASI ဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ ပထမဆုံး AAM သယ်ဆောင်နိုင်မယ့် တိုက်ခိုက်ရေး drone အယူအဆတစ်ရပ်ကို ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ရဲ့ ကာကွယ်ရေး သုတေသန အေဂျင်စီ DARPA ဟာ နောက်ဆုံးမှာတော့ Longshot လို့အမည်ရတဲ့ ဒီတိုက်ခိုက်ရေး Drone ပုံစံကို စတင်ဖော်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီး ဒီဒရုန်းက ဝေဟင်စစ်ဆင်မှု ဧရိယာနဲ့ လေကြောင်းတိုက်ပွဲတွေမှာပိုပြီး အသာရစေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။
GA-ASI အနေနဲ့ ဒီတိုက်ခိုက်ရေး Drone အယူအဆဟာ ဗြိတိန် ရဲ့ Bae’s Tempest နဲ့ တွဲဖက်တာဝန်ထမ်းဆောင်စေမယ့် Spirit’s LANCA drone တွေရဲ့ နောက် ၄ ရက်အကွာမှာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပြီး ၎င်းဟာ LANCA တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းတွေရဲ့ Loyal Wingman (သစ္စာရှိလေသူရဲ) အယူအဆတော့ နဲ့ အလားသဏ္ဍာန်တူပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
GA-ASI အနေနဲ့ ဒီဒရုန်းအယူအဆမှာ DARPA အတွက် တတိယမြောက် လုပ်ဆောင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပြီး အခြား အမေရိကန် SUAVs တွေဖြစ်တဲ့ Sparrowhawk နဲ့ MQ-1C Gray Egale တို့ရဲ့နောက်ကနေ ထပ်မံပေါ်ထွက်လာရခြင်းလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်ငယ်အနေနဲ့ AIM-120 နဲ့ AMRAAM လို အမေရိကန်လုပ် ဝေဟင်မှဝေဟင်ပစ် ဒုံးကျည်တွေကို တင်ဆောင်ပျံသန်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အခြားပိုကြီး တဲ့ UCAV သို့မဟုတ် လူမောင်းနှင်တဲ့ လေယာဉ်တွေဆီကနေ ဖြုတ်ချ ပျံသန်းနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။
၎င်းဟာ ရေဒါအပျောက် cruise missile တွေနဲ့ ပုံစံချင်းဆင်တဲ့ မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်ငယ်လေးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး AAM နှစ်စင်းထိသယ်ဆောင်ပစ်ခတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ကာ ရန်သူရဲ့ ဝေဟင်ပိုင်နက်ထဲကို ပိုပြီးနက်ရှိုင်းစွာနဲ့ထိုးဖောက်တိုက်စစ်ဆင်နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။
လူလိုက်ပါမောင်းနှင်ရတဲ့လေယာဉ်တွေနဲ့အတူယှဉ်တွဲကာစစ်ဆင်နိုင်မယ့်အပြင် ပေါင်းစပ်စစ်ဆင်နိုင်မှုက Bomber နဲ့ tanker တွေကို အစွမ်းထက်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး စနစ်တွေရဲ့ ရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်လို့ လူမောင်းနှင်ရတဲ့လေယာဉ်တွေရဲ့ရှင်သန်နိုင်မှုကို ပိုမိုတိုးတက်လာစေမယ်လို့ဆိုပါတယ်
Longshot combat drone
Previous Article ရုရှားတွေ ဘာလို့ နူကလီးယား လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွေ မတည်ဆောက်လည်း? (ဒါမှမဟုတ်) အမေရိကန်တွေ ဘာလို့ ဒီဇယ်ရေငုပ်တွေ မတည်ဆောက်သလည်း?
Next Article ကျားကိုအတောင်တပ်ပေးသလိုဖြစ်မယ့် အမေရိကန် Lockheed Martin နှင့် အစ္စရေး၏ Rafael ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်း၍ (Laser Weapon System) လေဆာလက်နက်စနစ်ကို ထုပ်လုပ်မည်